ne admin pane 07-09-2021
Wood-plastiki yakagadzirwa (WPC) madziro emadziro anodiwa zvakanyanya nevatengi nekuda kwekuita kwayo kwepamusoro, kusagadzikana kutsemuka uye deformation, nezvimwe. Chii chinonzi WPC Wall Panels? Wood-epurasitiki madziro mapaneru haasi nyore kuumbika, hunyoro-chiratidzo, zvipembenene-chiratidzo, nyore kuchenesa, ...
Izvo Zvaunofanirwa Kuziva Nezve Zvinoumbwa Dhizaini Tiles
ne admin pane 03-09-2021
Iyo huni-mapurasitiki ekushongedza DIY akateedzana anoratidza akakura masitayera ane diki chimiro, iyo inokodzera zvakanyanya kupaka muchivanze kana kuvheranda. Kutanga, ngatitarisei pamaitiro echigadzirwa: Aya ma ...
ne admin pane 31-08-2021
SPC ibwe repurasitiki repasi rakagadzirwa nepolymer polyvinyl chloride uye nebwe sezvakakosha zvigadzirwa. Mushure mekudziya-kupisa tembiricha yeiyo yakadzoserwa jira, iwo mana ma roller calender uye kupisa iyo yemavara firimu decora ...
Chii chinonzi WPC Cladding & Inoshandiswa Sei?
ne admin pane 27-08-2021
WPC kuputira izita rekuvaka. Izvo zvakare zvine hushamwari zvekuvaka zvinhu zvinonyanya kushandiswa kunze. Kuvhara kunogona kuvandudza kuputira uye aesthetics yechivakwa. Imwe yemabhenefiti makuru e claddi ...
Marble SPC Yepasi-Yakakosha Series Yekushongedza
ne admin pane 24-08-2021
Nei vanhu vazhinji vachisarudza SPC Yekutsika SPC (ibwe epurasitiki compostic) ibwe repurasitiki pasi, inonzi zvakare Hazvichinji-chinji musimboti vinyl Plank iri nyowani mhando yepasirese ine hushamwari pasi yakagadzirwa ...
Ndeupi musiyano uripo pakati peDEGE WPC Decking uye hwakajairwa Hupenyu hwepasi hupenyu hwebasa?
ne admin pane 20-08-2021
Matanda ndechimwe chezvinhu zvakakurumbira pasi, uye tinogona kuzviona munzvimbo zhinji. Asi panguva imwecheteyo, pasi pehuni kune zvimwe zvikanganiso. Kugara uchionana nemwaranzi yeultraviolet uye hunyoro kunopfupisa hupenyu hwebasa. Huni dziri eas ...
Nyowani EIR Mavara Ari Kuuya Kumusoro-Ruoko Grip Oak
ne admin pane 17-08-2021
Mamiriyoni gumi nemaviri emakore apfuura, paive nemiti yemiouki pasirese. MaGreek ekare nemaGerman vaitora iwo muouki senzvimbo yaigara vanamwari vavo. MuchiCelt, "Druid" (mupristi weDruid) rinobva pazwi rekuti oak. Runako rwemuti wemuouki rwakakwezva vadetembi nevapendi mu ...
WPC Kunze Wall Wall Yakakwira Yekushomeka
ne admin pane 13-08-2021
Vatengi vanowanzo tibvunza isu kana epanze madziro mapaneru anogona kumira akareba tembiricha? Pano ini ndinogona kunyatso tsanangura kuti edu emadziro mapaneru anogona kuvharirwa mune yakanyanya tembiricha mwaka uye kudzivirira kupisa kubva pakupararira mune yakaderera tembiricha mwaka. Inogona kudzivisa kupisa kwakanyanya ...
Floor zvishongedzo-Vangani vaunoziva iwe?
ne admin pane 11-08-2021
Floor zvishongedzo chikamu chakakosha mugadziriro yekumisikidza yepasi pevhu. Kwete kwete chete kune yakaoma huni pasi, asiwo yepurasitiki pasi. Zvigadzirwa zvikuru ndezve T-kuumba, kudzora, skirting, kukwira masitepisi, kapu yekupedzisira uye concave / scotia. Tambai basa rekuvanza ...